Nageenya Oromiyaa: Boombiin Mandiitti lubbuu galaafate, Baateetti reebichaaf saaxile - BBC News Afaan Oromoo
Nageenya Oromiyaa: Boombiin Mandiitti lubbuu galaafate, Baateetti reebichaaf saaxile
Godina Wallagga Lixaa Magaalaa Mandiitti kan argamu buufata waraanaa Raayyaa Ittisa Biyyaa irratti bombii darbatamen lubbuun namaa darbe.
Bombiin kaleessa ganama darbatamen namni tokko lubbuun akka darbe akkasumas namoonni madaa'an akka jiran Itti - gaafatamaan Waajjira Bulchinsaafi Nageenya Magaalaa Mandii Obbo Alamuu Guddinaa BBC'tti himaniiru.
Akka Obbo Alamuun jedhanitti boombiin kan dho'e A.L.I Kibxata Fulbaana 06 bara 2012 ganama naannoo sa'aatii 4:00 - 4:30 gidduu tilmaamamutti.
Ajjeechaan torban darbe Sambataafi Dilbata, Gidaamiifi Gullisootti, dhaqqabe dabalatee rakkoon nageenyaa lubbuu galaafate gama Lixa Oromiyaa yoo dhaqqabu guyyoota muraasa keessatti kun yeroo sadaffaafi.
Daarektarri Medikaalaa Hospitaala Magaalaa Mandii Dr Addaam Oljirraa ''Namoonni 3 jalqaba dhufani. Itti aansee immoo kan achumatti lubbuun isaa darbe tokkos dhufeera,'' jedhan.
''Madaan namoota jiranii madaa xixiqqaadha. Itti faca'aa boombii fakkaata. Kan isa du'e sanaas kanuma boombii fakkaata,'' kan jedhan Dr Addaam kan madaa'an yaalamanii deebi'u himan.
Dhoo'insa boombii erga yeroo dhihooti yeroo lammaffaaf magaalaa Mandiitti dhaqqaben kan shakkame ni jiraa jennee isa gaafanneef Obbo Alamuun ''hin baramne, qorachaa jirra,'' jedhaniiru.
Ajjeechaa tibbana Gidaamiitti raawwate
Kaampiin kuni kan raayyaa Ittisa biyyaa akka ta'e kan himan Obbo Alamuun qorannoon akka itti fufee himaniiru.
'Darbe darbe hin darbatama' kan jedhan Obbo Alamuun bara darbellee magaalaa Mandii keessa 'qaama nagaa hin barbaanne' jedhaniin bombiin darbatamuu isaa dubbatu.
Bombii yeroos darbatameen 'namoonni 7 madaa'uu' isaanii himu. Isa tibbanaan kan madaa'an garuu baruuf qulqulleeffachuun barbaachisaadha jedhu.
Jiraataan magaalaa Mandii yeroo boombiin dhuka'e dhagaheera jedhan tokko bakki bombiin itti dhuka'e magaalaa Mandii tulluurra kan jiruufi bara dargii eegalee buufata waraanaati jedha.
Bakka buufata waraanaa waajjiraaleen mootummaatu itti dhiyeenyaan argama. Namoonni rakkoo nageenyaan walqabateen to'annoo seeraa jala oolanii keessatti argamu jedhan.
''Namoonni miidhaman namoota to'annaa seeraatif gaaffii garaagaraatif yeroo sana turanidha,'' jechuun kan mirkaneessan immoo Hogganaa Kominikeeshinii Magaalaa Mandii Obbo Asfaaw Qalbeessaadha.
Haaluma wal fakkaatuun Godina Saba Oromoo Naannoo Amaaraa magaalaa Baateetti Samabata darbe boombiin kaampii humna addaa naannichaa magaalaatti keessa jiru irratti darbatamee ture.
Gocha kana haaloo bahuuf jecha Wiixata darbe humni addaa naannichaa jiraattota magaalaa Baatee irratti reebicha raawwachuu hogganaan waajjira bulchiinsaa fi nageenyaa aanaa Baatee Obbo Huseen Ahimad BBC'tti himaniiru.
Qaamni boombii sana darbate eenyu akka ta'e wanti beekamu hin jiru kan jedhan Obbo Huseen jiraataan magaalaa osoo adda hin baafamiin jumlaan reebamuu himu.
Godina Saba Oromoo naanno Amaaraatii eenyufaatu to'atame?
"Kallattii hundaan magaalaa keessas faca'anii reebani. Sadafii qawween, shimalaan nama reebaa turan. Uummata baay'eetu rukutame, nama arganii bira darbanhin qabani," jedhan.
Rakkoo nageenyaa kanaan dura godinicha keessatti uumamerraa kan ka'e hawaasaa fi humna addaa kana gidduu wal amantaan hin turre kan jedhan Obbo Huseen, sababa reebicha kanaan magaalatti keessa haalli gaariin akka hin jirres dubbataniiru.
"Uummata waliin durumaa ija jalaan wal ilaalaa turan, uummanni nurraa kaasaa jedhee gaafataa ture," jedhan.
Humni addaa kun erga magaalaa Baatee qubatee baatii jaha guuteera. Bombii Sambata darbatame kanaan poolisii irras ta'e qabeenyarra miidhaan gahe hin jiru.
Beenishaangul: ''Walitti bu'iinsa Daalattiitin namootni 13 lubbuu dhaban''
Sigigni lafaa lubbuu maatii shanii, namoota 22 galaafate
Ameerikaan haleellaa Siiriyaaf Tarkiirra qoqqobbii keesse
Poolisoonni 14 daddabarsitoota qoricha sammuu hadoochuun ajjeefaman
Kooriyaan Kaabaa fi Kooriyaan Kibbaa walmorkachuufi